Check mutengi nehwaro nepachinko parlors
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Check mutengi nehwaro nepachinko parlors
In nepachinko parlors vari siyana vatengi vave kuuya kuchitoro. Ko munhu neapo kuenda kutamba, asi ndinofunga kuti hazvisi zvikuru iwe basa mutengi chawo, ari nepachinko yokumusoro, vakadzi kazhinji zvitoro uye vashandi hofisi kazhinji zvitoro, kana, majaya vakadai zvitoro, izvo chikonzero ruzhinji kuti zvinyamusi uyewo mutengi chawo maererano muzvitoro.
nepachinko yokumusoro kuti vose kuenda ndiko, vorudzii muzvitoro kuti, kuti aone kana mukana uripo, uye chengeta Kutarira mutengi nechigadziko, zvinoshamisa izvozvo kunoita mukana zvakakwirira.
ungafunga pazvinoonekwa mutengi pangoro, asi panyaya kana pachikuva vakasarudzwa akaporazve mufurati, Zvichienderana mutengi nechigadziko, panewo crap guru sezvaaimboita iri tafura kutama. Mune zvitoro upi mutengi hwaro ndewekuti chinangwa meso, uye ipapo muudzame tsananguro yako.
Neniwo, asi ndinofunga kuti pane Ndanzwa shoko pachislot, chii vanhu mumwe Pachipuro, iri Pakutanga, asi izvo usaita vanoomerera Zvakaoma kuziva. Sezvo tiri zviito dzakawanda munhu anonzi Pachipuro uye Semi-nyanzvi, pane cheki duku bhinzi Data. Uyewo zuva rega zvakajeka kutamba, vane serura kana nebhuku rokunyorera, izvozvo hunenge kutarira mashoko.
maitiro ichi, pane kubenzi, mamwe matanho ari slots, mumakore achangopfuura, ndizvo akadai vaduku vatengi varume kunyange kana asiri nyanzvi, iwe zvinogona akaita kuti kuongorora umboo pamusoro wako. Vachitaura
nepachinko, vanorega kurova, nezvimwewo, vanhu vanowanzogara ari vatengi kuti kufamba siyanei ruoko, pane mukana Pachipuro. In, nepachinko parlors pane Pachipuro ndiko, uye vanoti kana nepachinko parlors panze, handitaure categorically kuva zvakadaro. Pachipuro yatovapo, kuongorora umboo zuva nezuva muchitoro, iwe wasvika kutsikwa nenjere tsika muzvitoro.
kuvavarira yebhuruu-Chip bhodhi nembambo pfungwa, ndiko kuti kushanyira.
Pachipuro chokwadi kuti zviripo kureva, ndiwane zvichida kumira, asi ndechokuti pane vari mbambo-pfungwa kubva pakati dzakawanda vezvikwata, akadai vanofanira I chinangwa, zvitoro yakanaka tafura riri duku, nyore kukunda vari mudzidzi tapota funga zvinhu zvakaoma .
Pachipuro chinhu kuti hazvisi kuenzana Winning nyore kuchitoro. Pachipuro, sezvo rokushandura chouviri panguva nepachinko pamusoro kwemari, kunyange kuenda zvimwechete 'That zvisingabviri nyaya mudzidzi. Professional pane chinangwa zvitoro varipo, uye vanonanga muchitoro akasiyana-siyana vatengi kuunganidza, ndiwo mukana kuhwina ari neizvi kumusoro.
muzvitoro chipi mutengi chawo, ari kutaura zvakanaka zvenyu Miseka, uye vatengi kuti vari kutamba kuti haazivi nepachinko zvikuru, vakadai vanhu dzinotambura nguva, uye pane zvakasiyana-siyana vanhu, vakasununguka yepamusoro Mirai zvakashandurwa zvichava nyore. Chokwadi kuti mutengi mujinga ane siyana kwakadaro kuunganidza ndechokuti pane mukana kuti pane muzvizhinji uyewo rakaisvonaka tafura.
munhu asingadi kuenda kamwe chete panguva, izvozvo zvingava kunyanya akanaka pakusarudza chitoro kuona mutengi chawo. Achitaura nepachinko, mira bedzi Vanhu vanowanzofunga kuenda maziso kusarudza, nokucherechedza kumativi zvakanaka, edza kuva akangwara kurwa divi.